Irlandy dia tokony hampiakatra ny tahan'ny 12,5% ho an'i Apple sy ireo lehibe hafa Vaovao IPhone
Irlandy dia tokony hampiakatra ny tahan'ny 12,5% ho an'i Apple sy ireo lehibe hafa
Alex Vicente | 22/06/2021 18:00 | About us
Orinasa teknolojia lehibe toa an'i Apple, Google, Microsoft ary orinasa hafa no manangana ny foiben'izy ireo any Irlandy noho ny tombotsoany amin'ny resaka haba izay tokony aloa. Ireo orinasa ireo dia mandoa hetra 12,5% ankehitriny ary mety tokony hovaina amin'ny drafitra manerantany natolotry ny fitantanan'i Biden izany, saingy tsy dia manohana azy ireo ny governemanta Irlanda satria hahita ny isan'ny orinasa manaisotra ny HQ-ny amin'ny firenena.
Ny firenena G7 sy ny Vondrona eropeana dia nahavita fifanarahana nifehy izay hametrahan'ny firenena mpikambana rehetra hetra farafahakeliny amin'ireo orinasa miorina amin'ny 15%, hampiakarana ny vola aloa ankehitriny any Irlandy amin'ny isa 2,5.. Mazava ho azy, ny firenena dia efa naneho ny tsy fankasitrahany an'ity fepetra ity saingy izao dia vonona ny hifampiraharaha amin'ireo teboka izay mihatra amin'ilay hetra voalaza ireo.
Contextualizing ny toe-javatra ankehitriny, lIreo firenena dia manana ny fahafahana mampihatra isan-jato isan-karazany amin'ireo orinasa mahazo tombony amin'ny firenena tsirairay. Amin'ity lafiny ity, Irlanda no firenena eropeana manana hetra ambany indrindra ho an'ireo orinasa amin'ny tombom-barotra azony, 12,5%. Izany no nahatonga ny orinasa matanjaka toa an'i Apple, Google, Microsoft ary ny hafa nanangana ny foiben'izy ireo eto amin'ny kaontinanta amin'ity firenena ity. Tsara ho an'i Irlandy izany satria mahasoa fa mety tsy ho azony izany raha tsy izany. Izany indrindra no tranga mahazo an'i Apple, izay ivon-toerana ny tombony azony avy amin'ny firenena eropeana rehetra any Irlandy mba hahazoany tombony amin'ity isan-jato ity.
Etazonia dia nanolotra hetra kely indrindra 21% saingy tsy nisy ny fifanarahana iraisam-pirenena. Mifanohitra amin'izany, Eny, io 15% io dia nifanarahana tamin'ireo firenena G7 sisa (USA, UK, France, Alemana, Canada, Italia ary Japan) ary ny Vondrona Eropeana. Amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny Vondrona Eropeana azy dia tokony hitsambikina avy any 12,5% i Irlanda ho 15% nifanarahana.
Fantatr'i Irlandy fa raha toa ka tsy maintsy asian'izy ireo marika ny tahan'ny hetra mitovy amin'ireo firenena sisa ao amin'ny Union, dia tsy misy antony tokony hijanonan'ny orinasa haba ao ary hametraka ny HQ ao aminy. Izany no mahatonga an'i Irlandy toa te-hifampiraharaha amin'ny "fanoloran-tenany" amin'ny taha ampiharin'izy ireo amin'ireo orinasa ireo. Na izany aza, Toa tsy hahita fanohanana firy izy io satria ny sisa amin'ny firenena dia mahita ity taha ity ho tombony amin'ny fifaninanana mihoatra ny ambiny rehefa mandoa hetra any amin'ny firenena samihafa ny orinasa lehibe. Ho hitantsika ny vokatr'izany mety hateraky ny orinasa, ny fikambanan'izy ireo ary ny asa vaovao mety hipoitra any Eropa ankoatry ny Dublin HQs.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Irlandy dia tokony hampiakatra ny tahan'ny 12,5% ho an'i Apple sy ireo lehibe hafa
Amin'ny alàlan'ny libre ho an'ny iPhone 13, Apple dia nanoratra azy ireo tao amin'ny tahiry fanaraha-maso Eurasia
Andro voalohany: fifanarahana tsara indrindra amin'ny vokatra Apple (Andro 22)